Kufamba kuburikidza neLatin Quarter, muParis | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Paris, Chii chekuona
Imwe yemakona anodakadza e Paris ndiyo ChiLatin Quarter, kumahombekombe ekuruboshwe eSeine, pachishanu kupfugama kubva kuguta guru reFrance. Icho chiri muLatin Quarter umo La Sorbonne iri, semuenzaniso, pakati pemamwe masosi ezvidzidzo, nzvimbo ine nhoroondo uye yetsika inokosha.
Kafesi, maresitorendi, vashanyi, vadzidzi, mapindu, mamuseum, zvitoro, dunhu iri rakakurumbira saka a rwendo kuParis Izvo hazvina kukwana pasina kufamba kuburikidza neLatin Quarter.
1 Chikamu cheLatin
2 Chii chaungaone muLatin Quarter
Zita iri rakabva kupi? Kubva kuMiddle Ages, apo vadzidzi veSorbonne vaigara munharaunda uye vakashandisa chiLatin semutauro wekudzidza. Chinhu chinoramba chichiitika nanhasi, pakuti saiti izere nevadzidzi. Muzana ramakore rechi68 nerechiXNUMX vadzidzi vamwe chete ava vakaronga mafambiro ezvematongerwo enyika akakosha enguva iyoyo, semuenzaniso, mukurumbira waMay 'XNUMX.
Nekudaro, chinhu chakanakisa usati watanga kufamba famba pano kuverenga zvishoma nezve nhoroondo yeLatin Quarter. Kuti utore mukana, nzwisisa uye utarisezve. Musuwo wepamberi unowanzo kuve iyo Nzvimbo deSaint Michel, ine tsime rayo nedhiragoni. Beyond labyrinth yemigwagwa inovhura pane zviripo maresitorendi nemakamuri, vamwe vane masitepisi, kunyangwe mugwagwa mukuru uye unonyanya kufarirwa ndiRue Huchette
Chii chaungaone muLatin Quarter
El Cluny Museum Iyo diyamu miziyamu ine hupfumi kubva kuMiddle Ages. Inoshanda munzvimbo yekare yekugara yeababoti veCluny uye pano iwe uchaona matanhatu epasi anozivikanwa matepi anozivikanwa seMukadzi uye Unicorn. Ruvara, rwakagadzirwa nemaoko, ane anopfuura mazana mashanu emakore ekuvapo.
Pamusoro peidzi pfuma, nzvimbo yacho ine mapindu akanaka ekufamba-famba kwechinguva. Ehe, parizvino yakavharwa. Iri pasi pekugadziriswa uye yekupedzisira Nyamavhuvhu 29 yakavhara madhoo ayo kusvika 2022. Imwe inonakidza uye inozivikanwa saiti ndiyo Shoko reShakespeare neKambani, ane chitoro chekutanga muParis yakavhurwa muna 1919.
Chivako ichi chakatanga kubva pakutanga kwezana regumi nemanomwe century, apo paive monastery, asi chitoro chemabhuku chinobva kuma50. Chitoro chakashongedzwa nemidziyo, piyano, tapureta, nezvimwe. Kana iwe ukatenga bhuku rinozoiswa chidhindo pamwe nemucherechedzo wechitoro chemabhuku, uye kana iwe uchida kugara padhuze unogona kunwa kofi mune yekudyira iri padhuze, yakatarisa Seine.
Iyo pantheon Izvo zvakare zviri muLatin Quarter. Yaimbove chechi ine dome hombe asi nhasi yenyika uye inopa mutero kumagamba eFrance. Pano pavigwa Voltaire, Victor Hugo, vaviri veCurie naAntoine de Saint-Exupery naLouis Braille. Icho chivakwa chakarairwa kuti chivakwe naLouis XV sechechi mushure mekupora kubva pakurwara uye nekudaro, chakazadzikiswa muna 1791 nemumwe mweya weGothic uye wekare.
Iyo dome yakakura uye yakavhurika uye pazasi payo pane inozivikanwa Foucault pendulum (Wakaverenga bhuku risingazivikanwe naUmberto Eco?). Iyo pendulum ndeye kuyedza kwaFoucault kuratidza kuti Pasi rinotenderera.
Kune rimwe divi, kumagumo kweLatin Quarter ndiwo ma Luxembourg magadheni, kunyanya kuwanda pakupera kwevhiki. Kune miti yakawanda, nzira, vanhu vanotaura kana kuita chiitiko chemuviri. Kumativi epakati padziva pane zvigaro zvekugara, chimwe chinhu chakajairika futi.
Moyo wemagadheni imba yamambo. Iyo minda musi kubva 1612 uye zvakagadzirwa muchidimbu naPrincess Marie de Medici, akazova Mambokadzi weFrance. Nhasi imba yamambo inoshanda seFrance Senate. Iyo minda inovanza zvinopfuura zana zvivezwa uye kunyangwe chidiki diki mufananidzo weiyo yakakurumbira Statue yeRusununguko iyo yakapihwa kuUnited States neFrance. Iko kune zvakare yakanaka uye ine rugare Medici Tsime.
Rimwe gadheni rakanaka i Bindu rezvirimwa, gadheni re botanical rine zvinopfuura 4500 zvakasiyana zvirimwa: gadheni rerosi, gadheni reAlpine uye gadheni remuchando reArt Deco. Kune zvakare matatu makuru makuru maresheni anotangira kubva muzana ramakore rechiXNUMX, inoyevedza simbi uye magirazi mamiriro. Kupinda kuri mahara, asi kana iwe uchida kuziva iyo zoo and the Natural Nhoroondo Museuml ndinofanira kubhadhara mari yekupinda. Muye yekupedzisira miziyamu pane gallery yakatsaurirwa kune zvicherwa, imwe yekushanduka uye imwe kune paleontology.
Imwe inonakidza miziyamu ndiyo Curie Museum. Inoshanda kwaakashanda iye uye akadzidza radioactivity nemheni. Marie Curie, zvinokodzera nguva dzose kuyeuka, ndiye aive mukadzi wekutanga kuhwina Nobel uye ave purofesa kuSorbonne. Heano marimba ekare esainzi uye gadheni diki rakanaka. Iyo saiti yakavhurwa Chitatu kusvika Mugovera kubva 1 kusvika 5 pm.
Panyaya dze ChiLatin Quarter machechi kune mana anotonga nzvimbo: Saint-Etienne, mutsvene-Severin, Saint Julien le Pauvre naSaint Mèdard. Zvese zvakanaka kwazvo.
Mushure mekufamba kana panguva kana kumagumo, maFrench maresitorendi nemaresitorendi anogara achitinyengedza kuti timbozorora tidye nekunwa chimwe chinhu. Mu Sorbonne Square kune Les patios, nzvimbo yakanaka yekudyira. Anotevera musuwo ndiTabac De La Sorbonne, yakanaka pakudya kwekuseni kunonaka wedzera.
Ehe, pane mamwe masaiti uye ini ndinofunga zviri kwauri kuti uwane ako aunoda. Kune akawanda uye chakanakisa chinhu ndechekuti urege iwe uende, kudzungaira uye kumira pane izvo zvinokwezva kutarisa kwako.
Latin Quarter ine migwagwa inoyevedza, zvikwere zvidiki, zvivakwa zvekare, zvifananidzo zvine mabara aungave unofarira kuverenga, zvitoro zvemarudzi ese. Mufananidzo we Conciergerie tarisa Ini handikwanise kuipotsa, futi. Chave chiri mubhizinesi kubvira 1370 uye chidimbu chikuru cheinjiniya. Kana kufamba mukati Sainte Chapel. Makore apfuura pandakaenda, yaive mukudzoreredzwa uye yaive ichiri runako. Mahwindo egirazi akasviba akanaka uye iwo madudziro… Oh Mwari wangu!
Kana iwe uchirenda furati uye makicheni, ipapo kufamba kwakanaka kunogona kunge kuri kutevedzera tsoka dzaJulia Mwana, iye mukadzi wemumiriri weAmerica uyo muma50 akanyora bhuku rekubika. Julie naJuliku. Akaita zvekutenga mu Rue Mouffetard Musika. Matanga anovhurwa na9 mangwanani, kuvhara masikati uye kuvhurwa masikati.
Kana iwe uchifarira Tsika yeMuslim, nekuti muParis iripowo uye munharaunda inomiririrwa mu Yakakura Mosque yeParis, rakakura kwazvo muguta, rakavambwa muna 1926.
Ehe magadheni ayo akanaka uye ane nzvimbo yakakurudzirwa yekudyira uye tii imba. Pakati pemitsetse yakafanana ndiyo iyo ChiArabhu Nyika Yese, iyo inoongorora zvipo zveArabhu nesainzi. Icho chivakwa chivakwa chemazuva ano chakagadzirwa naJean Nouvel kubva kuma80 ekupedzisira ezana ramakore rechiXNUMX Kuvhura kwawo kuvhura nokuvhura kureta kozuva.
Sezvauri kuona, iyo Latin Quarter yeParis ine zvishoma zvezvose uye hazvizokuodza moyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Paris » Kufamba kuburikidza neLatin Quarter, muParis